intuthuko kwezobuchwepheshe akusho yima, inani lezitolo zabantu lukhula nsuku zonke. Okhipha ihlanganisa kokubili ukwamukelwa futhi ejabulisayo, yesimanje, futhi okubaluleke indlela elula yokwenza ibhizinisi.
Okhipha yiyona ukuthengiswa ezihlukahlukene izimpahla ngosizo imishini ekhethekile. Zonke kuthatha usomabhizinisi - ukufaka leli thuluzi, uyilandele umkhiqizo luwuphendule eziko likagesi, njengoba phi nye lisebenze yasendlini. Isebenza ngempela bamane: imishini ifakwe abamukelayo amanothi kanye zemali bezinhlangano ezihlukahlukene (ezinye anganika ushintsho), futhi lapho abe screen akhethekile izinkinobho ngawo umsebenzisi ukhetha izimpahla oyifunayo kuye, bese -Goods ngokoqobo pops ezandleni ezingaba iklayenti.
Izinhlobo amadivayisi Wendigo
Kukhona amasu amaningi kakhulu ahlukile ukudayisa ukudla kanye iziphuzo. Phakathi ethandwa kakhulu yilezi: umshini isidlo, ikhofi-mshini, imishini Vending ngoba ukudla okushisayo ezohwebo kanye non-ukudla izinto. Bonke babe idivayisi efanayo lobuchwepheshe, kodwa ngesikhathi esifanayo izici zayo siqu ngokuvumelana izinhlobo zezimpahla ukuthi kuzobe kudayiswa.
Ukuze ekuqaleni abantu abadala is kuhambisana kahle kuyinto umshini Vending nge ezihlukahlukene kashokholethi, ama-crackers, futhi ngezinye izikhathi nabo, wabuye ethengisa iziphuzo asemabhodleleni. Iinsetjenziswa isidlo lula angabacwasi ukulondoloza. Endabeni amaphutha amancane angenza ngaphandle kolwazi ezikhethekile. Enough ukufunda amadokhumenti wobuchwepheshe noma imininingwane, ngesikhathi ukusebenza, ukuhlola imishini isidlo. Amazwana ngalezi imishini ngidayisa zingatholakala ngamanani amakhulu ku-intanethi, kukhona izinkundla eziningi ezikhethekile lapho osomabhizinisi ngolwazi nolwazi, kanye oxhumana ewusizo.
Kanye umshini isidlo, ikhofi-umshini yisisombululo ethandwa kakhulu inzuzo. ukubeka kahle kakhulu umshini ikhofi eduze umshini ukudayisa ukudla, njengoba umthetho, emva iklayenti kwadingeka kokulunywa afuna ukuze ucime ukoma. Le nqubo kungaba uthele kakhulu futhi itiye, futhi ngezinye izikhathi - nobisi jelly, konke kuncike kudivayisi ethile futhi izithako ezikhethiwe.
Ukufaka imishini isidlo, nezinye izimoto bezentengiselwano indawo ekhethwe kahle yavletsya sikhathi esibaluleke kakhulu ibhizinisi Vending. Indawo ekhethiwe kweyeme permeability futhi inani yokuthengisa. ukubeka kahle kakhulu imishini enjalo zezitimela, izikhumulo zezindiza, zezitolo, izikole, kanye nje bamba ezitolo ezinkulu (imikhiqizo non-ukudla).
Eyesibili Isici esiyinhloko siwukuthi zamanani. Akubalulekile ukuze kufuthwe intengo, enethemba lokuthi iklayenti lakho kuyodingeka akukho ukukhetha. Cishe, iklayenti lakho uyomane kungadlula ayisekho kufaneleka umshini wakho, ngisho khulumisana nabangane nabantu obajwayele. Kodwa uma inani imikhiqizo yakho kuyoba kancane sihluke isilinganiso intengo, maningi amathuba okuthi uzobe esasizobhujiswa empumelelweni, ikakhulukazi lawo maphuzu lapho izitolo zokuthenga kanye iIgama izikhungo kude, noma uma kwasemini baphule ikhasimende kukhawulwe isikhathi esifushane.
Njengomthetho, osomabhizinisi sifisa abasenkonzweni yesikhathi izimoto bebodwa. Akukho lutho nzima mayelana ukuze ujike ukhiye, ukuqoqa isabelo sezimali, umkhiqizo noma wengeze izithako, uthele amanzi esimweni imishini ikhofi. Njengoba kuphawulwe ngenhla, iphutha encane ikhambi enengqondo ngokwakho, kodwa ngokuvamile, uma udinga imishini ukulungisa isidlo, kangcono ukuze ujike ochwepheshe. Njengoba ojwayelekile, inkonzo abanekhono anganikeza ngabakhiqizi noma ongenisa imishini, ngezinye izikhathi kungase ungenwa noma isiqinisekiso isisekelo, futhi kukhona izindleko ezengeziwe. Uma ithuba ukuxhumana abakhiqizi noma cha zingabantu kwelinye idolobha noma isifunda, ungathola njalo onguchwepheshe zendawo, technical ngaphezulu kudivayisi imishini efanayo sifana nemishini ekhaya namakhompyutha, ukuze uma kukhona isidingo, kukhona supply.
Yini enye edingekayo ukuba nebhizinisi ezifana
Into esemqoka - ukuba athathe ukuma, uma ungeyena usomabhizinisi. Uma kungenjalo, kufanele azise isiphathimandla intela yomsebenzi entsha. Kufanele sisebenzise kwabasemthethweni bentela futhi ukukhetha zomthetho. Iningi efanelekayo Vending - SP. Ukulandela wokufaka kwemibhalo, ukhethe uhlobo intela kanye nemali yokubhaliswa yokukhokha kanye ngemva kwezinsuku ezimbalwa ngeke ngokusemthethweni ube usomabhizinisi. Kuyinto kuqala ledzingekako zonke ukuxazulula izinkinga neziphathimandla okugada, kanye ngempumelelo ukufaka imishini yakho kwezinye izinkampani. Ngokuvamile, akekho umuntu intando kwashintsha ngabanye, futhi khona SP useshnoe ukwandisa amathuba wokwenza inkontileka ukunikeza isikhala kudivayisi.
Okulandelayo, udinga ukuxoxisana umninindlu wakho mayelana kokufaka emshinini wakho. Uma ikamelo lakho, lokhu inkinga ixazululiwe, kodwa isikhathi esiningi siye sitholakale Vending sebeqala osomabhizinisi. Njengomthetho, uzobe ukudleka kwamandla kanye intela uqobo lwaso. Uma indawo kakhulu ndima, futhi unesibopho ukwakhiwa kwezikhungo hhayi ovumelana, singadinga iphesenti elincane inzuzo yakho, kodwa siyindlala.
Uma kwenziwe ngendlela efanele, imishini yakho uzokhokha for ngokwalo kunalokho ngokushesha futhi baqale ukukhiqiza imali ekahle. Ngikufisela inhlahla!
Indlela yokuvula i-Pizzeria: ukuthuthukiswa project nezimfuneko ukubekwa
Nokia 200: izici kanye nokubuyekeza
Iphethini elingenamikhono for girls. Indlela thunga nobusika coat for girls ngezandla zabo?
Abanukubezi - ungubani na? UMthetho ukunukubezwa. ngeziphambeko ngokocansi